थक म आराम गर्न जाँदैछु - मुद्रण गर्नका लागि पाठ र पाठ
थक म आराम गर्न जाँदैछु - पाठ
बालबालिकाका गीतहरूको अडिशन एक वास्तविक र सिद्ध निद्राको सहायता हो। प्रभाव, अन्य चीजहरू बीच, तथ्यबाट नतिजा कि युवा बालबालिकाले संगीतलाई माया गर्छन्। स्वस्थ स्वभावको विषयमा अझ बढी विस्तृत अध्ययनहरू साबित गर्छन् कि बच्चाहरू सजिलै सङ्गीतको माध्यमबाट राम्रो आराममा आउँछन्।
शीट संगीत र गीत थक म आराम गर्न जाँदैछु
आमाबाबुले नर्सरी कविताका थुप्रै फाईदाहरु लाई बिस्तारै सोच्नका लागि आमाबाबुहरुलाई विशेषज्ञ हुनु हुँदैन। तर यो सुनिश्चित गर्न को लागी कम्तिमा कम्तिमा लगभग सही छ, तपाइँ हाम्रो बालबालिका-अनुकूल डिजाइन गरिएको टेम्प्लेट प्रिन्ट गर्न स्वागत छ कि नर्सरी कविताका नोटहरू र पाठको साथ। ठूला छोराछोरीले पातहरू नोट र पाठसँग पनि प्यान्ट गर्न सक्छन्!
म थकित छु, आराममा जानुहोस्,
दुवै आँखा बन्द गर्नुहोस्:
बुबा, तिम्रो आँखा छोड्नुहोस्
मेरो बिस्तारमा हुनुहोस्!
मैले आज गलत गरे,
यसलाई नबिर्सनुहोस्, प्रिय भगवान!
तपाईंको कृपा र येशूको रगत
के सबैलाई हानिकारक हुन्छ।
मलाई भन्दा घृणा र ईर्ष्या,
मलाई प्रेम र दया।
मलाई तपाईंको महानता देख्न दिनुहोस्,
हे भगवान, विश्वास मात्र मा भरोसा राख्नुहोस्।
जो मेरो संग सम्बन्धित छ,
भगवान, तिम्रो हातमा आराम गरौं,
सबै मान्छे, ठूलो र सानो,
तपाईलाई अर्डर गर्नु पर्छ।
बालबालिकाको गीतबाट टिप्पणीहरू म एक ग्राफिक्स फाईल खोल्नको लागी आराम गर्न जान्छु